Hooyga Barbaarinta Qoyska & Wanaaga Bulshada » Haweenka Iyo Siday U Quursadaan Ragga “Akhriso Sheeko Cajiib Ah Oo Ka Turjumeyso Quursiga Dumarka”..
Haweenka Iyo Siday U Quudhsadaan Ragga
Wiil reer magaal ah oo aan nolosha iyo waayaha miyiga waxba kala socon oo war moog ah, tan iyo intii uu dab ka baydhayna baadiye iyo meel uu yahay toona aan arag ayaa waxa uu xilligii fasaxa ay galeen ardayda dugsiyadu tegay miyiga oo adeerkii deganaa,xoolo fiicanna uu ku haystay.
Xilliga guga ee samadu irmaantahay arladuna biqilka soo tuurto,beeluhuna guud ahaan ay faaja “faajaoodka ku jiraan,xooluhuna adhi iyo ishinba ay kambal daaq yihiin.
Waxa lagu yaqaanaa raacatada in ay xiraadka dabadii isugu baxaan fagaarayasha ciyaaraha oo dhalinta reeruhu ay ku caweysimaan,iyagoo isku maaweelinaya ciyaaraha hiddaha iyo dhaqanka.
Cabdi dhuub kolkii uu reerkii joogay 7 habeen, isagoo ay dhinacyadu murxeen ilayn waa nin bartay inuu ku seexdo furaash,halka hadda ay gogoshiisii noqotay saan jarco ah oo reer looga soo ergisay
Waxa uu soo toosay saqdii dhexe ,tiiyoo wiilashii ardaaga ay wada seexdeen mid qudhiba aanu hurdin isaga mooyee. Yaab iyo fajac buu ilaahay u keenay wiilkii faracasta ahaa.
Ku noqay hurdadiisii isagoo cabsiyina ay hayso,in kastoo bahal dad iyo bahal dugaag aanay midnaba beeshu cabsi ka qabin oo ay xero nabaadiino ku jireen , hadana waxa kaliya ee uu wadnaha farta ku hayey waxa uu ahaa libaax , waraabe iwm.
Dhawr toddobaad ka dib ayuu wiilkii reer magaalk ahaa ogaaday in wiilasha reeerka ee filkiisa ahi ay ciyaar gudaan habeenkii. Habeeenkii dambe ayuu seexanwaayey si uu feedha uga raaco caawa oo uu soo arko halka ay tegayaan iyo hawsha ay qabanayaan nooca ay tahayba.
Goor saq dhexe ah oo ay moodayaaN in uu hurddo ayaa la Iswada qanjiidhiyey oo oodda la jebiyey si fagaaraha ciyaarta ay u tagaan.Cabdi dhuub oo diyaar ah oon xalay oo dhan labno indhood isu keenin baa baasha ka raacay wax la is asii eryodaba waxa la soo gaadhay madashii cayaarta,halkaasoo dhalintii uu midba baal ka galay oo jiibta iyo jaaanta la is la helay.
Goor dambe oo waa ku dhawaad ah baa cayaartii la soo gebogabeeyay,wiilashii iyo gabdhihiina midba uu mid feedha ka raacay.kuwo sheeko wadaag lahaa iyo kuwa kaleba.
Cabdi dhuub dhaqanka miyiga iyo axwaashiisaba waa uu ka dhacsanyahay,maadaama uu nin magaalo yahay. Suleekha oo meel hortiisa ah sii laafyoonaysa ,qurux iyo qiime haaweenna Rabbi u dhameeyay buu damcay in uu la haasaawo oo hadallo ku tuurtuuro,lamaba uu sugine isla markiiba waxa uu damcay in uu gacanta qabsado Qalanjadan rag badan kabuhu kaga madheen raadinteeda iyo u jilib dhigeeda. Jaamo qaraaafiic ahaa oo cusub oo ay suleekhi xidhnayd bay isla markiiba inta ay siibtay afka boodda kaga dhigtay,kolkaasuu dhiiggu hayrafay wiilkii xarragada la tiicayey.
Labada fool horaadna isla agoobtii ay kus oo dhaceen. Waxa si dhakhso ah kolkiiba gurmad ahaan u soo gaadhay dhalinyaradii kale ee aagga ka dhawaa,cabdi dhuub iyo suleekhana isku daawanayey kolkooda horeba. Cadhadii Suleekhi waxay bilawday in ay muusanowdo una qayshato wiilashii ay la dhalatay iyo kuwo badan oo ay ilma adeer ahaayeenba,hase ahaaatee Jaamac Dheere oo ay Cabdi Dhuub ilma adeer ahaayeen baa Suleekha u caqali celiyey oo ku yidhi waa reer magaal aan waxba garanayne anagaa abaalkiisa marine inaadeer jooji muusanowga iyo qaylada.
Suleekhi waxay qaadan la’dahay oo u cuntami la’ nin uun baa aadyar gacantaada ku dhegi!
Dhaawaca gaadhay faduuligii faraha la galay qalanjadii wax bog iyo baabaco lehoo u bir dhigta la waayey,isaga laba cali ismay weydiin,waayo waxa dhalinyarada kaga weyn oo wadnah farta ku hayan in gogol loo dhigto oo xaal inaneed la weydiisto. Taabashada wiilka reer magaalka ahna loo aqoonsado faro xumayn.colaad sokeeyena ay dhex marto dhalinyaradii isku reerka ahayd ee walaalaha ahayd.
Qore: C/Naasir Dheeg Ciise